နေ့စဉ် ၀မ်းမှန်မှန် သွားစေမည့် နည်း ၇ သွယ်
(၁) ၀မ်းသွားချင်စိတ်ကို ချိုးနှိမ်မထားပါနဲ့။ ၀မ်းသွားချင်စိတ်ပေါ်တာနဲ့ အိမ်သာကို ချက်ချင်းသွားပါ။ (၂) အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းထဲမှာ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ ရှင်သန်နေပါစေ။ အဲဒီလိုဖြစ်စေဖို့ ဒိန်ချဉ်လို အစာများများ စားပေးပါ။ (၃) အမျှင်ဓာတ် ပါဝင်မှုများတဲ့ အစာကို ပုံမှန် စားပေးပါ။ (၄) ရေဓာတ်...
ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ ခွဲစိတ်ရင် အနာကျက်ပါ့မလား
မေး။ ။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေအနေနဲ့ ခွဲစိတ်ကုသရင် အနာမကျက်ဘူးလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါက မှန်ပါသလားသိချင်ပါတယ်ရှင်။ ထွေးငယ် (FB) ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပါသည်။ ဖြေ။ ။ ဆီးချိုရှိရင် အနာမကျက်ဘူး၊ ဆီးချိုရှိရင်ခွဲလို့ မရဘူးဆိုတာ အယူအဆမှားတစ်ခုပါ။...
မျက်စိနှင့်ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးပြဿနာ ဆက်စပ်မှုများ
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီး) မေး. မျက်စိကိုစစ်ဆေးရင်း အခြေခံရောဂါတစ်ခုခုကို သံသယ၀င်လို့ လူနာကို ရှင်းပြရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို သိပါရစေဆရာ။ တစ်ခါတုန်းက လူနာက သူ့မှာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ရှိနေမှန်းလုံးဝမသိဘူး။ မျက်စိမှုန်တယ်ဆိုပြီး ဆရာ့ဆီ လာရောက်...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမေရိကန်မှာ လူတစ်သိန်းလေးသောင်းနီးပါးဟာ အူမကြီးကင်ဆာ ခံစားနေရပါတယ်။ စအိုကနေ သွေးထွက်တာက အူမကြီးကင်ဆာမှာ အတွေ့ရများတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပြီး တခြား လက္ခဏာတွေကိုလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အောက်ပါလက္ခဏာတွေကို သတိပြုမိရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ – သွေးအားနည်းနေခြင်း...
တရုတ်ရိုးရာစုပ်ခွက်ကုထုံးကြောင့် နောက်ကျောတွင် အပေါက် ၇ ပေါက်ဖြစ်သွား
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာမှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီ သမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့ စုပ်ခွက်ကုထုံးကြောင့် အသက် ၆၃နှစ်အရွယ် လင်လင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားရဲ့နောက်ကျောမှာ အပေါက် ၇ပေါက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ လင်လင်ဟာ သူရဲ့ဇက်ကြောတက်ဝေဒနာ ပျောက်ကင်းဖို့အတွက် မေလကနေ ဇွန်လအထိ နေ့တိုင်း ဒီကုထုံးကိုခံယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။...
နှာခေါင်းပိတ်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း သက်သာစေမည့် ဂျပန်နှိပ်နည်း
(၁) ပါးရိုးပေါ်မှာ လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းတင်ပြီး ဖိပေးပါ။ ပြီးရင် စက်ဝိုင်းပုံအတိုင်း လက်ချောင်းတွေကို အချိန် ၅-၁၀ မိနစ်ခန့် လှည့်လည်နှိပ်ကာ ရွေ့လျားပေးပါ။ (၂) လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းစလုံးကို မျက်ခုံးမွေး ထိဆုံတဲ့နေရာမှာ တင်ပြီး ဖိပေးပါ။ ပြီးရင် စက်ဝိုင်းပုံအတိုင်း လက်ချောင်းတွေကို အချိန်...
အိပ်စက်စဉ် ခြင်အကိုက်မခံရစေမည့်နည်း ငါးသွယ်
စူး ( ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ) အိပ်မောကျနေချိန်မှာ ခြင်အကိုက်မခံရစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ (၁) ညအိပ်ဝတ်စုံ ဘောင်းဘီရှည်၊ အင်္ကျီလက်ရှည် ၀တ်အိပ်ပါ အရေပြားကို ဖုံးအုပ်မှု နည်းလေလေ ခြင်အကိုက်ခံရနိုင်လေလေဖြစ်တဲ့အတွက် အိပ်မယ်ဆိုရင် ညအိပ်ဝတ်စုံ လက်ရှည်အင်္ကျီနဲ့ ဘောင်းဘီရှည်ကို ၀တ်ဆင်ပါ။...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ -သရက်သီးစိတ် ခွက်ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံ၊ -ထောပတ်သီးမှည့် ခွက်ရဲ့လေး ပုံတစ်ပုံ၊ -အဆီမပါတဲ့ ဒိန်ချဉ် ခွက်ရဲ့လေး ပုံတစ်ပုံ၊ -သံပရာရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ် ဇွန်း၊ -သကြား ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ -ရေခဲ အသင့်အတင့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို...
နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်လိုဖြေလျှော့မလဲ . . .
လရိပ်မေ (၁) လူအများစုဟာ မိသားစုအရေး၊ စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်ကုန်ရင်း ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်အချိန် မပေးနိုင်ကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက် တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ အချိန်ပေးရပါမယ်။ (၂) ကိုယ့်စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကို ကိုယ်သိပြီးဘယ်အချိန်မှာ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပြီဆိုတာ နားလည်ပါ။...
Page 310 of 460« First‹ Previous306307308309310311312313314Next ›Last »
မျှဝေခြင်း . . .
အသက်ရှူကြပ်ပြီး နုံးခွေကျန်ခဲ့တယ် ဆရာ . . .
ငါးနှစ်ကြာနှာရည်ယိုနေတဲ့ အမျိုးသမီး နောက်ဆုံးမှ ဦးနှောက်အရည်တွေ ထွက်ကျနေကြောင်းသိလိုက်ရ
အသက်ကြီးသူများ ၀မ်းချုပ်ခြင်း သက်သာစေရန်
ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းနေသူတို့အတွက် ညဘက် ဗိုက်မဆာစေမည့် နည်းများ
ဖုန်းအသုံးများခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများ
ရေအများကြီးသောက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး (၁) ( Drinking too much water : ‘can it be beneficial or harmful for your health’ )